कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप भण्डारण गर्न ठाउँको अभाव देखिएको छ । २ देखि ८ डिग्रीको खोप भण्डारण गर्ने क्षमता केही भए पनि माइनस तापक्रममा खोप भण्डारण गर्ने ठाउँको अभाव देखिएको हो । कोभ्याक्सबाट आउने २० प्रतिशत खोपसमेत भण्डारण गर्ने क्षमता नेपालसँग पर्याप्त छैन । भण्डारणका लागि ठाउँको अभाव हुने सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
‘पहिलो चरणमा आउने ३ प्रतिशत खोपको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ’, खोप शाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘१७ प्रतिशत खोप एकैपटक आयो भने भण्डारण गर्न गाह्रो हुन्छ ।’ १७ प्रतिशत आयो भने ठाउँ छैन । प्रदेश १, २ र बागमतीमा समस्या हुन्छ ।’
शाखाका अनुसार नेपालसँग माइनस २० सम्मको ७ हजार ५ लिटर राख्ने क्षमता छ । ‘माइनसको खोप राख्ने क्षमता हामीसँग कम छ’, उनले भने, ‘सुरूमा आउने ३ प्रतिशतका लागि १० हजार लिटर क्षमताको चाहिने अनुमान छ ।’
कुन प्रदेशमा कति क्षमता ?
टेकुस्थित केन्द्रमा २ देखि ८ डिग्रीको साढे ४५ हजार लिटर खोप राख्न सकिने क्षमता छ । प्रदेश १ को विराटनगरमा करिब ९ हजार ७ सय लिटर खोप भण्डारण गर्ने क्षमता छ । प्रदेश २ मा भण्डारण गर्ने ठाउँ नै छैन । नियमित खोपसमेत प्रदेश २ मा प्रदेश १ र बागमती प्रदेशबाट वितरण गरिँदै आएको छ ।
प्रदेश २ को सिरहा र सप्तरीमा प्रदेश १ बाट र बाँकी छ जिल्लामा बागमती प्रदेशको होटौँडाबाट खोप वितरण गरिने शाखाले जनाएको छ । हेटौँडामा २ हजार २ सय खोप भण्डारण गर्ने क्षमता छ । टेकुस्थित केन्द्रमा भने साढे ४५ हजार भण्डारण गर्ने क्षमता छ । केन्द्रमा पनि नियमित प्रयोग गरिने खोप राखिएको छ ।
‘केन्द्रमा पनि नियमित बच्चा र आमालाई लगाउने खोप राखिएको छ । कोभिडको खोप आयो भने नियमित खोपलाई अन्तै सार्नुपर्ने हुन्छ’, खोप शाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘अथवा अर्को कोल्डचेन थप्नुपर्ने हुन्छ ।’
गण्डकी प्रदेशमा ९ हजार लिटर, ५ नम्बर प्रदेशमा ११ हजार लिटर, कर्णालीमा ७ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९ हजार लिटरको हाराहारीमा खोप भण्डारण गर्न सकिने क्षमता छ ।
अहिले भएको भण्डारण क्षमता पनि कोभिडको खोपको लागि होइन । नियमित खोपको मात्र हो । त्यो पनि भण्डारण क्षमता प्लसको मात्र हो । माइनसको भण्डारण गर्ने क्षमता कम छ । फाइजरको खोप सफल भयो भने नेपालमा भण्डारण गर्ने संरचना नै छैन । फाइजरको खोप माइनस ७० डिग्रीमा भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘अरू सफल नभएर फाइजरको मात्र सफल भयो भने भण्डारण क्षमता थप गर्नुपर्छ । हामीसँग माइनस २ देखि ८ डिग्रीसम्मको मात्र क्षमता छ । यसका लागि केही थप गरे पुग्छ । माइनस २० डिग्रीका लागि थोरै छ । यसको पनि क्षमता थप्नुपर्छ । माइनस ७० डिग्रीको हो भने हामीसँग क्षमता नै छैन । पूरै थप गर्नुपर्छ’, खोप महाशाखा प्रमुख डा. झलक गौतमले भने ।
नेपालसँग प्लसको मात्र भण्डारण क्षमता भएकाले सरकारले पनि प्लसकै खोप ल्याउने संकेत देखाएको छ । तर, प्लसको खोप ल्याउँदा पनि अहिलेको संरचनाले धान्ने स्थिति छैन । सेरम, मोडर्ना र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले एक्ट्राजेनेकासँग मिलेर बनाएको र नोभाभ्याक्सको खोप प्लसको हो । फाइजर र मोडर्नाको खोप माइनस हो । बेलायत र अमेरिकाले माइनसको खोप प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ ।
‘कोरोनाविरुद बनिरहेका खोप माइनसको मात्र छैन । प्लसको पनि बनिरहेको छ । २ देखि ८ डिग्री प्लसको खोप पनि छ’, शाखाका प्रमुख डा. गौतमले भने, ‘प्लसको आयो भने क्षमता अलि बढी छ । माइनस २० डिग्रीसम्मको क्षमता थोरै छ । प्लस २ देखि ८ को आयो भने सहज हुन्छ । माइनस प्लस दुवैका लागि संरचना भने थप्नुपर्छ ।’
कुन खोप ल्याउने र कति ल्याउने भन्ने यकिन नभएकाले भण्डारण क्षमता बढाउन समस्या देखिएको छ । ‘भण्डारणका लागि भवन र सामग्री थप गर्ने तयारी गरेका छौँ’, उनले भने, ‘कुन खोप ल्याउने, कति ल्याउने भन्नेमा भरपर्छ ।’ भण्डारणका लागि टेकुमा भवन निर्माण भइरहेको छ । दुई वर्षभित्र काम सक्ने गरी संरचना बनाउन लागिएको हो तर अहिलेसम्म भवन निर्माणको काम सुरू भएको छैन । गाभीको सहयोगमा प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशमा कोल्डचेन बनाउने सरकारको योजना छ ।
कोरोनाविरुद्ध अमेरिकाका, भारत, चीन, रुस, ब्राजिललगायत देशमा भ्याक्सिन निर्माणको काम भइरहेको छ । अमेरिकी कम्पनी फाइजरले जर्मन बायोएनटेकसँग मिलेर बनाएको भ्याक्सिन, अमेरिकी कम्पनी मोडर्ना र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर बनाएको भ्याक्सिनको प्रभावकारिता धेरै देखिएको छ ।
नेपाल सरकारले पनि ७२ प्रतिशत जनतालाई खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । पहिलो चरणमा कोभ्याक्स कार्यक्रमबाट प्रत्येक देशका २० प्रतिशत जनताका लागि ६० लाख डोज भ्याक्सिन नेपालमा ल्याइनेछ । यो ६० लाख डोज स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक क्षेत्रमा अग्र भागमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीलगायतलाई प्रयोग गरिन्छ ।
भण्डारणको संरचना निर्माणदेखि खोप ल्याउनसम्म ४८ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने सरकारको अनुमान छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस ८, २०७७, ०८:०९:००